History of Kalaw village ကလောရွာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မဘသ ဒုဥက္ကဌကြီး သီတဂူ သံဃာ့ညီလာခံအတွင်းသမိုင်းလိမ် သမိုင်းညာတွေနဲ့ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုတွေ ဟောကြားသော မိန့် ခွန်းအပြည့်အစုံ
Htin Lin Oo *-+သမ္မတ–လုပ်မလို့**-+ »
History of Kalaw village ကလောရွာ
၁၉၀၁ ခုနှစ်မှာရိုက်နှိပ်ခဲ့တဲ့ အထက်မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဂဇက်မှာ ကလောရွာ နဲ့ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြထားတာ ကလောချစ်သူများအတွက် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကလော တိုက်နယ် အကျဉ်းကိုလည်း အချိန်ရရင် ဘာသာပြန်တင်ပေးပါအုံးမယ်။
ကလော။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မြေလတ်ခရိုင်ရှိ သာမိုင်းခမ်းနယ်၏ ကလောတိုက်နယ်တွင်းမှ ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။
၄င်းသည် အစိုးရဖောက်လုပ်ထားသော လှည်းလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင် လှပစွာ တည်ရှိနေသည်။ သာစည်ဘူတာမှ မိုင်ခြောက်ဆယ်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်များနှင့် ဗမာပြည်အကြား ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် သွားလာနေသော လှည်းတန်းများအတွက် သဘောကျစရာ
အကောင်းဆုံး နားနေစရာ နေရာ ဖြစ်သည်။
၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင်၊ ၄င်း ကလောရွာ၌ ခြောက်ဆယ်သုံးအိမ်ရှိပြီး၊ မှီတင်းနေထိုင်သူ ၂၈၂ ရှိပြီး နှစ်စဉ် အခွန်တော် ၁၉၉ ရူးပီး ထမ်းဆောင်သည်။
This entry was posted on March 29, 2015 at 7:28 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.